Kim Kardashianová (ndọ Kimberly Kardashian West, ọmụmụ aha Kimberly Noel Kardashian, * 21. 1980 October, Los Angeles) na ihe American telivishọn àgwà, nlereanya na entrepreneur of Armenian si malite, nwunye rapper Kanye West.
O toro a bara ọgaranya obi nke Los Angeles, Beverly Hills, n'ihi na nna-ya, Robert Kardashian bụ nchoputa nke Movie-awụ ọsọ n'ugwu, Inc. ma ama ọkàiwu (n'etiti ndị ọzọ gbachiteere football player OJ simpson, ya onwe ya na enyi). Enyi ya site na nwata bụ Paris Hilton, nke Kardashianová dị ka a ụdị celebrity, mgbe mgbe tụnyere. Na-eto, o na-arụ ọrụ nna ya ụlọ ọrụ, mgbe ahụ, ọ chọrọ ka ya dị ka ihe omee, ma ọ na-emezughị.
2006 afọ laghachiri azụ ahịa na-emeghe na ya ndị nwanyị abụọ na trendy boutique ike kụrie na Calabasas.
2007 natara onwe ya na nzuzo videoNke o mere na ya mgbe enyi nwoke Ray J. doro anya Entertainment ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ maka ndekọ nke otu nde US dollar na malitere ere ya n'okpuru aha nke Kim Kardashian Superstar. Ụlọ ọrụ Kardashian adabaala ma nyefee nhụjuanya ise nde dollar. Ndekọ ndekọ ya nwetara ọkwa ya na ụlọ ọrụ telivishọn E! Network Kim nyere ya show, eziokwu show e sere ya ndụ nakwa na nke ezinụlọ ya (ndị nwanyị Kourtney na Khloé, nwanne Robert, nne Kris Jenner, kuchiri na Olympic Medalist Bruce Jenner-ndinyom Kendall na Kylie). Ihe ngosi a bụ Ịnọgide na Kardashians ma nwee ihe ịga nke ọma. O kpochakwara ihe osise egwu maka Playboy.
Year 2008 Kim Kardashianová, ịghọ ndị kasị ewu ewu celebrity search engine Google na US, nke ruo mgbe ahụ bụ na-agụ egwú MNa na Magdolna. Ọ ghọrọ ihu Bongo Jeans na ụdị ísì ụtọ ya. Ọ gbalịrị ịwa site na fim ahụ, ma ọ nwetara ọtụtụ nhọpụta maka Golden Rape maka ihe kacha njọ.
Otuto na-eme ka mmekọrịta dị n'etiti ndị nwoke a ma ama na-ejikarị ngwa ngwa gbaa alụkwaghịm. Ngwongwo ahu biara 2012 mgbe o ghutara enyi nke onye ama ama mara mma Kanye West. Na 2013 ọ mụrụ nwa ya nwanyị North. 2014 weere di na nwunye na Florence, Italy, na otu afọ mgbe e mesịrị, 5. December 2015, nwa Saint West ka a mụrụ. 15.ledna 2018 ya na-anọchi anya nne ya Chicago West.
EgwuregwukatuunuKim KardashianKim Kardashian
Ọnwa 11 gara aga
Otu esi choro usoro ihe eji eme ihe n'igwe
Obodo Mba ENDURO XC Loukov 2018
Ojuju nke ọnwa 27.7.2018